गुट-उपगुटको भुमरीभित्र काँग्रेसः कहिले बन्ला असल पार्टी ? | Citizen Post News
गुट-उपगुटको भुमरीभित्र काँग्रेसः कहिले बन्ला असल पार्टी ?
२०७५ फागुन २८ गते ०९:४७
काठमाडौँ । सरकारविरुद्ध आन्दोलनको डंका छाड्ने तर कारण नदेख्ने मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति मौलाउन थालेको छ । सरकारले गरेका निर्णयमा नै दुई फरक धार र विचारको बहस चलिरहेको कांग्रेसले सदनमा समेत सरकारका कामका बारेमा खास प्रश्न उठाउन सकेको छैन । डा. शेखर कोइरालाले सीके राउतसँग भएका सहमतिको आलोचना गरेका छन् भने उपसभापति विमलेन्द्र निधीले सकारात्मक कदम भएको भन्दै सरकारको प्रशंशा गरेका छन् । यी बाहेकका अन्य मुद्दामा पनि कांग्रेस कमजोर देखिएको छ ।
खासगरी तीन गुटमा विभाजित देखिएको कांग्रेसभित्रको मतभेद समाधानका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पहल नगरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको कांग्रेसभित्र सभापति देउवा पुन अर्को कार्यकालका लागि कस्सिएका छन् भने उनलाई हटाउन अन्य गुट प्रभावशाली बन्ने होडमा छन् । सोही क्रममा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको घरमा पनि दोस्रो तहका नेताको सामुहिक बैठक भएको थियो । त्यसअघि उनै नेताहरूको बैठक सुजाता कोइराला निवासमा बारम्बार भएको थियो ।
काँग्रेसमा देउवा, पौडेल र सिटौला गुट प्रष्ट रूपमै देखिन्छ । तर उनीहरू पृथक विचार र एजेन्डाका आधारमा गुट सञ्चालन भने गरिरहेका छैनन् । समाजवादी चिन्तक एवम् काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीले काँग्रेसमा गुटबन्दीको लफडा स्थापना कालदेखि कायम रहेको बताए । त्यहि गुट अहिले गिरोह बन्न थालेको उनको तर्क छ । विचारका आधारमा समूह विभाजित भए राम्रो हुने भए पनि अहिले कांग्रेसका नेतामा यो व्यक्ति उसको र त्यो व्यक्ति यसको भन्ने विवाद र तानातान रहेकाले गिरोह बन्न थालेको गिरीको ठम्याई छ ।
उनी भन्छन्,‘मतभेदको आधार पनि छैन, तै पनि तँ मेरो मान्छे कि उसको मान्छे भन्ने कुराले मात्र मान्यता पाएको छ । यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन ।’ एउटै गुट चाँडै दुई–तीनवटा गिरोहमा परिणत भएका छन् । अहिले काँग्रेसभित्र देउवा पक्ष र पौडेल पक्ष भन्ने छ । तर फेरि देउवा गुटभित्र पनि अनेक उपगुट सिर्जना भएको छ । पौडेल गुटभित्र पनि त्यस्तै उपगुटहरू हाबी भएका कारण गिरोह बनाउने खेल भइरहेको गिरीले बताएका छन् ।
हिन्दुत्व मान्ने नै गुट-गुटमा:
हिन्दु राज्य हुनुपर्ने मागमा अडिग रहेका कतिपय नेता स्व. खुमबहादुर खड्का हुन्जेल उनीसँग थिए । तर, अहिले अनेक गुटमा विभाजित रहेका छन् । हिन्दु राज्यका लागि महासमिति बैठकमा चर्को माग भएको थियो । हिन्दुत्वको पक्षमा पूर्वमन्त्रीहरू मोहन बस्नेत, भक्तबहादुर बलायर, चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, पूर्वगृहराज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ, पूर्वप्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरे, केन्द्रीय सदस्यहरू शंकर भण्डारी, कुमार खड्का, पुष्पा भुसाललगायत छन् ।
डडेल्धुरा सभापति कर्णबहादुर मल्ल, कास्की सभापति कृष्ण केसी, ओखलढुङ्गा सभापति प्रदीपकुमार सुनुवार, अछाम सभापति भरतबहादुर स्वाँर, बझाङ सभापति हर्कजङ्गबहादुर सिंह, हुम्ला सभापति जयपति रोकाय, राजुराज जोशी र भारतेन्द्र मल्लिकलगायतका महासमिति सदस्य हिन्दुत्वको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । मल्लले त उक्त विषयलाई महासमितिको छलफको विषय बनाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वको आलोचनासहित प्रस्ताव नै जारी गरेका थिए ।
यी सबै अनेक गुटमा विभाजित छन् । हिन्दुत्वका विषयमा देउवा गुटमा रहेका निधी र सिटौला सहमत छैनन् । त्यसकारण उनीहरूको विचारले महासमिति बैठकमा जित हासिल गरेको थियो । हिन्दू राष्ट्र पक्षधर काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले हिन्दू राष्ट्रको विषय १४औँ महाधिवेशनमा सघनरूपमा उठ्ने दाबी गरिन् । पार्टीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको भन्दै उनीहरूको आवाज रहेको दाबी गरिएको छ ।